Qaar ka mid ah macmacaanka iyo waxyaabaha macmacaanka ah ee reer Morocco | Safarka Absolut
Mid ka mid ah dhinacyada sida ugu wanaagsan u matalaya dhaqanka waddanku waa gaastoriskiisa. Midka ka yimid Marooko wuxuu leeyahay maaddooyin faro badan iyo suxuun kala duwan sababtoo ah is-weydaarsiga dhaqameed ee tirada badan ee dalku la yeeshay dadyow kale taariikhda oo dhan sida reer Berber, Carab ama dhaqanka badda dhexe.
Sidaa darteed, waa gastronomy la safeeyey laakiin fudud isla waqtigaas, halkaasoo isku darka dhadhan macaan iyo milix leh iyo sidoo kale isticmaalka dhir udgoon iyo xawaash ay ka muuqdaan.
Laakiin haddii gastronomy Moroccan loo yaqaan wax, waxaa loogu talagalay macmacaan fiican. Haddii aad u jeceshahay karinta oo aad leedahay ilig macaan, ha seegin qoraalka soo socda oo aan dib ugu eegeyno qaar ka mid ah macmacaanka ugu fiican ee Morocco.
1 Maadooyin noocee ah ayaa loo isticmaalaa rootiga Morocco?
2 Top 10 macmacaan reer Morocco
2.3 Geesaha geesaha
Maadooyin noocee ah ayaa loo isticmaalaa rootiga Morocco?
Macmacaan Marooko badanaa waxaa laga sameeyaa bur, semolina, lows, malab, qorfe iyo sonkor. Isku darka maaddooyinkan waxay keeneen cuntooyin caan ah oo si dhakhso leh ugu fiday adduunka.
Buugga kaladuwan ee kaladuwan ee macmacaanka reer Marooko dhexdiisa waxaa ku jira suxuun badan laakiin haddii aadan waligaa isku dayin takhasusyadooda, ma seegi kartid macmacaankan.
Top 10 macmacaan reer Morocco
Mid kamid ah macmacaanka xidigta ee cunnooyinka Bariga Dhexe ee xadka kasoo gudbay. Asalkiisu waa Turkiga, laakiin markii uu ku sii fiday adduunka, waxaa soo baxay noocyo kala duwan oo ku daraya noocyo kala duwan oo nuts ah.
Waxaa lagu sameeyaa subag, tahini, budada qorfe, sonkorta, iniinta iyo cajiinka phyllo. Tallaabada ugu dambeysa ee karinta ka dib waa in lagu maydhaa malab si aad u hesho macmacaan leh dhadhan macaan oo aad u caan ah oo ay weheliso cufnaan cufan oo laga helo isticmaalka lowska iyo doolshaha filo.
Cuntadani waa mid aad u fudud oo aad si fudud ugu diyaarin karto guriga. Si loogu adeego, waa in loo kala gooyaa qaybo yar yar maxaa yeelay waa macmacaan si cadaalad ah u iswaafaqsan. In kasta oo aanu ka iman Maghreb, haddana waa mid ka mid ah macmacaannada ugu isticmaalka badan dalka Marooko.
Sawir | Wikipedia waxaa qoray Indiana Younes
Mid ka mid ah macmacaanka reer Morocco ee ugu caansan, gaar ahaan carruurta, waa Seffa. Waa saxan aad looga jecel yahay dalka oo leh nooc cusbo leh oo macaan. Waxaa badanaa la sameeyaa munaasabadaha taariikhaha gaarka ah, kulamada qoyska, marka ilmuhu dhasho ama xitaa xafladaha aroosyada.
Intaa waxaa dheer, waa wax aad u fudud in la diyaariyo sidaa darteed uma baahna in waqti badan lagu qaato jikada. Xitaa waa la cuni karaa sida quraacda maadaama saxankan uu hodan ku yahay karbohaydrayt isku dhafan oo dhaliya tamar waarta, taas oo ku siisa wax kasta oo aad ugu baahan tahay inaad ku wajahdo maalin dheer shaqada.
Si aad u diyaariso nooca macaan ee Seffa, waxa kaliya ee aad u baahan tahay waa wax yar oo couscous ah ama baastada bariiska ah, subagga, yicibta la jarjaray, sonkorta miraha leh iyo qorfe. Si kastaba ha noqotee, waxaa sidoo kale jira kuwa ku darsada timir, diirka liinta, shukulaatada, pistachios ama liinta la shiilay maadama ay tahay saxan lala qabsan karo dhadhanka qoyska iyadoo lagu darayo waxyaabo kale.
Seffa waa mid ka mid ah macmacaanka ugu caafimaadka badan ee reer Marooko maxaa yeelay couscous waxaa ku jira xaddi badan oo faybar ah, oo ku habboon nadiifinta jirka. Intaa waxaa dheer, yicibku wuxuu leeyahay qadar badan oo kaalshiyam ah. Marka la soo koobo, qayb ka mid ah Seffa waa ikhtiyaar aad loogu taliyay in aad baterigaaga ugu buuxiso si caafimaad leh oo macaan leh.
Sawir | Okdiario
Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha macaan ee ugu badan Marooko ayaa ah geesaha kabalgazal ama cawl, Nooc ka mid ah daadinta udgoon ee ay ka buuxaan yicibta iyo dhir udgoon oo qaabkoodu u egyahay geesaha xayawaankan ku nool dunida carabta ee la xidhiidha quruxda iyo xarrago.
Macmacaan macaan ee qalooca waa mid ka mid ah macmacaanka dhaqanka Marooko inta badanna waxaa la socda shaah xilliyada gaarka ah.
Diyaar garowgeedu ma aha mid aad u dhib badan. Ukunta, burka, subagga, qorfaha, sonkorta, casiirka iyo diirka liinta ayaa loo isticmaalaa cajiinka jajaban. Dhinaca kale, yicibta dhulka iyo biyaha ubaxyada liinta ayaa loo isticmaalaa dhajinta gudaha geesaha cawl.
Sawir | Cuntada Maroquin
Loo yaqaan 'churro Moroccan', Sfenj waa mid ka mid ah macmacaanada ugu caansan Morocco, waxaadna ka heli kartaa meherado badan oo waddooyinka ku yaal magaalo kasta oo dalka ka mid ah.
Qaabkeedu wuxuu u egyahay dugaag ama donut waxaana lagu bixiyaa malab ama sonkor budada budada ah. Dadka reer Marooko waxay u qaataan sidii aperitif, gaar ahaan saqda dhexe subaxnimada oo ay la socdaan shaah macaan.
Maaddooyinka loo isticmaalo sfenj waa khamiir, milix, bur, sonkor, biyo diirran, saliid iyo sonkorta lagu shubo dusha sare si loogu qurxiyo.
Mid ka mid ah suxuunta ugu dhadhanka badan ee Alahuita cunnooyinka waa briwats, qaniinyada buskudka yar yar oo laga buuxin karo baastada cusbada leh (tuna, digaag, wan ...) iyo macaan waxaana badanaa lagu bixiyaa xafladaha iyo xafladaha.
Noocdeeda sonkorta leh, laaluushku waa mid ka mid ah macmacaanka dhaqanka Morocco. Waa keeg yar oo qaab saddexagal ah cajiimkiisa cufanna aad u fudud in la diyaariyo. Sida buuxinta, diyaarinta biyo ubax liin ah, malab, qorfe, yicib, subag iyo qorfe ayaa loo isticmaalaa. Farxad!
Mid kale oo ka mid ah macmacaanka reer Morocco ee ugu caansan waa jihada, taas oo sidoo kale loo yaqaan "keegga miskiinka saboolka ah." Waxaa badanaa lagu qaataa quraacda koob shaah ah ama kafee ah. Fudud laakiin casiir leh.
Awooda nafaqada oo aad u saraysa awgeed, Chebakias waa mid ka mid ah macmacaanka reer Morocco ee ugu caansan ee soonka jabiya bisha Ramadaan. Aad ayey caan u yihiin oo ay aad u caam tahay in laga helo suuq kasta ama dukaan duug ah oo dalka ku yaal sida ugu wanaagsan ee loo dhadhamiyaa waa kafee ama shaah mint ah.
Waxaa lagu sameeyaa cajiinka burka qamadi loo sameeyay si loo shiilo oo loogu adeego silsilado duuban. Taabashada asalka ah ee chebakias waxaa siiya dhir udgoon oo lagu miiray, sida safrron, nuxurka ubax liinta, qorfe ama anise dhulka. Ugu dambeyntiina, mac-macaankan waxaa lagu shubay malab waxaana lagu shubayaa sisin ama sisin. Farxad u ah kuwa jecel macmacaanka leh dhadhan daran.
Sawir | Vganish
Tani waa mid ka mid ah macmacaanka reer Morocco ee farmaajo aan la diidi karin. Bannaanka ku yaal oo casiir ku leh gudaha, kani waa macmacaan Bariga Dhexe oo macaan oo lagu sameeyey timo malaa'ig, subag la caddeeyey iyo jiis akawi gudaha ah.
Marka la kariyo, kanafeh waxaa lagu daadiyey sharoobada udgoon-biyoodka leh oo lagu rusheeyey iniinta la jajabiyey, yicibta ama pistachios. Macmacaankan udgoon ee macaan ayaa ah daaweyn dhab ah wuxuuna kuu qaadi doonaa Bariga Dhexe laga bilaabo qaniinyada ugu horeysa. Waxaa la qaadaa gaar ahaan ciidaha Ramadaan.
Sawir | Wikipedia waxaa qoray Mourad Ben Abdallah
In kasta oo asalkiisu ku yaal Algeria, makruud wuxuu noqday mid ka mid ah macmacaanada ugu caansan Morocco waana mid ku badan Tetouan iyo Oujda.
Waxaa lagu gartaa iyadoo leh qaab dheeman ah cajiinkiisana waxaa laga sameeyay qamadi semolina ah, oo la shiilay kadib markii la buuxiyo timir, berde ama yicib. Taabashada ugu dambeysa waxaa lagu bixiyaa iyadoo lagu maydhinayo makruud malab iyo biyo ubax liin dhanaan ah. Macaanaa!
Sawir | Farshaxan
Mid kale oo ka mid ah macmacaanka reer Marooko ee loogu adeego dhammaan noocyada kala duwan waa feqqas. Kuwani waa buskud jajaban oo la dubay oo lagu sameeyay bur, khamiir, ukumo, yicib, biyo ubax liin leh iyo sonkor. Waa la cuni karaa keligood ama waxay ku dari karaan sabiib, lawska, anis ama sisinta cajiinka.
Feqqas waxaa lagu gartaa dhadhankooda khafiifka ah ee ku habboon dhammaan dhadhanka. Fez ahaan waa dhaqan in loogu adeego qaybo fekqas ah oo leh baaquli caano ah sida quraac loogu talagalay carruurta. Dadka qaangaarka ah, wehelinta ugu fiican waa shaah aad u diirran oo diirran. Ma awoodi doontid inaad mid uun isku daydid!
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Macmacaanada caadiga ah ee Marooko iyo macmacaanka